Stephan El Shaarawy Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Vanotamba Nhabvu Stephan El Shaarawy Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "The Pharaone". Our Stephan El Shaarawy Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekufamba kwake, kudonha uye simba, asi vashomanana vanoona Stephan El Shaarawy's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Stephan El Shaarawy Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Stefani Kareem el-Shaarawy akaberekwa musi we 27th weOctober 1992, muSasona, Italy. Akaberekerwa amai vake veItaly, Lucy El Shaarawy uye baba veEgipita, Sabri El Shaarawy avo vakakonzerwa nehupfumi hwemamiriro ehupfumi vakabva Egipita ndokuenda kuItaly kunotanga mhuri yake. Pasi pane mufananidzo wevabereki vaviri.
Kunge Edin Dzeko, Stephan akakurira sezita reMuslim uye akakurira pamwe chete nehama yake imwechete Manuel Shaarawy uyo anoitika kuva mutariri wake uye mutsigiri mukuru webhola.
Stephan's childhood story inofadza, kana isingawanzozivikanwi - ndeyeyemukomana muduku akanaka akazviwana akakomborerwa ane talente yepamusoro yepamusoro. Chaizvoizvo, iye akarota yebhola kubva paudiki hwake mazuva. Sezvo mwana, Stephan aishandiswa kutamba mitambo yakawanda asi aive akabatanidzwa nebhola. Paakanga ava nemashanu kana matanhatu, vabereki vake vakamubvumira kuti adzore Legino, kambani muSasona. Stephan akagara ipapo kusvikira aine 11.
Pasinei nekuisa pfungwa pakuva muchengeti wepamberi, Stephan achiri kukwanisa kudzidza kuonga kummai wake. Akanga ari mukuru wekirasi yake. Vabereki vake vakabvuma kuti mwanakomana wavo aifanira kupedzisa chikoro asati abhadharira kambani yake yekutanga sekuonekwa mubhuku iri pasi apa.
Nemhaka yevadzidzi, El Shaarawy akava nyanzvi yekupedzisira yebasa rekuzara. Akatanga basa rake revechidiki neGenoa rakaderera chaizvo pazera remakore gumi nemana. Pasinei nekutanga nguva, Stephan akapinda muboka rekutanga pasina nguva uye rakamubatsira kukura mumutauro wose wemutambo. Nokuona mavhidhiyo eKaka wake muenzaniso wake, Stephan akawana chitubu chakakonzera kuenderera mberi nekuvandudzwa.
Baba vake vakabatsirawo nekupa iye nevana vake vemauto kuti vabvumire kutamba muimba yake duku mushure meimba yeimba yavo vasingatauri ruzha rungangodaro.
Stephan El Shaarawy Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
Stephan akatenda mukati make uye akaratidzira kuzvipira uye kutsunga mune zvose zvaakaita.
Sezvo kutarisana kwebhola, zvaive zvakawanda pamusoro pezvaakaita nemusoro wake kupfuura makumbo ake. Stephan akaramba akazvininipisa kwose kuburikidza nokukunda uye kurasikirwa nemamiriro ezvinhu. Akashandiswa kuronga mazano kubva kune shamwari dzangu nemhuri pane zvaaigona kuvandudza. Pana 21 December 2008, paakanga ari makore 16, akaita boka rake rekutanga kutanga kuva mutambi wechidiki worusere munhoroondo yeSerie A kuti aite kutanga kwake muItaly top division.
Zvisinei, basa rake rakasuruvara nekuda kwezvikamu zveinjury-hit mishandirapamwe yakaiswa pakati pe2013 kusvika 2015. Izvi zvakaitika mushure mekunge avhiyiwa asingabudiriri kuruoko rwake rworudyi rwakakundikana kuporesa zvakanaka. Mushure menguva yekushayikwa kwenguva refu kuburikidza nekukuvadza, boka rake, Milan yakasarudza kumutumira kunze kuMonaco pane chikwereti chenguva yakareba nechisarudzo chokutenga.
Paakanga achikweretesa, Monaco akamutamba achimhura uye mhosva yake ikava yakaipisisa. Mumwaka iwoyo wekukwereta, Stephan akazununguka kunze kwechikwata panguva yaaiva 1 game shomanana yeMonaco achiita mutemo unomira kumutengesa. Achinetseka, akatumirwa kudzokera kuMilan akakurumidza kumubhadhara kuenda kuRoma sezvo chibvumirano chavo chemari chikwereti chakanaka uye chisingaperi. Chishamiso chakauya apo Stephan akawana ahalf scorpion flicked backheel chinangwa (Video iri pasi) kune Roma iyo yakaita kuti basa rake rigare rakasimba. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Stephan El Shaarawy Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Mushumo unoti Stephan akatanga ukama hwake paimba yekutamba nehutano hwake hunhu hwakanaka, Ester Giordano. Ukama hwavo hwakabatora kubva paukama hwebhetie ku rudo rwechokwadi. Stephan akamboyeuka kuti chimwe chezvakakanganwa achiri muduku zvekuri muduku zvaive kuzivisa rudo rwake kune Ester uye achitenda kuti vangazoroora rimwe zuva.
Kunze kwebasa rake roumhizha, Stephan El-Shaarawy anozivikanwa kuti anonakidzwa noupenyu nemusikana wake, Ester Giordano uyo waanofambidzana naye zvikuru.
Havana kuwana vakaroorana sapanguva yekunyora kana kuti havana vana vezvakaberekwa kana vana vanobvuma. Zvose zvavanoita ndeyokudiwa zuva nezuva uye kushandisa nguva yakanakisisa pamhenderekedzo yegungwa.
Stephan El Shaarawy Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts-Zvimwe Zvako
Stephan El Sharawy ane huzhinji hunhu hweunhu hwake. Kutanga, tinopa LifeBogger yake kuenzanisira pasi apa.
Zvokudya zvake zvaanoda: Trofie al pesto - chimiro cheGenovese ndiro uye yerinose yakabikwa jisi.
His Strengths: Anobatanidzwa, anopindirana, ane nyasha, asina hanya, anzanga.
ake Kushaya simba: Anogona kunge asina kugadzikana, anorega kupikisana, acharamba ane shungu uye kuzvidzora.
Chii iye likes: Anoda Flyboarding (sezvinoratidzwa mumufananidzo uri pasi apa), kuve nekutenda mashura, kuva nemitambo yekufananidza, unyoro, kugoverana nevamwe uye kufara kunze (zvakare sekuonekwa pasi).
Zvaasingadi: Pose nguva, Stephan haadi kuitirwa chisimba, kusaruramisira, mheremhere, kufanana.
Mukupfupisa, Stephan ndeye rugare, kururamisira, uye kuvenga ari oga. Kubatana naye kwakakosha zvikuru. Maererano naStephan, chinhu chimwe chete chinofanira kuva chakakosha kwaari ndechepfungwa yake yemukati uye rudo rwake kune Ester. Ndiye mumwe munhu akagadzirira kuita chero chinhu chipi zvacho kuti arege kupokana, kuchengeta rugare rwake chero nguva zvichibvira.
Stephan El Shaarawy Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Stephan anobva kumhuri yakadzika yemhuri yakamboshandiswa nababa vake, Sabri El Shaarawy. Vose vari vaviri vanofananidzirwa pasi vanotanga kuva nevana vavo munguva yavo yekupedzisira ye30.
Zvakakosha kucherechedza kuti panguva iyoyo semwana, Stephan's Mum Lucia Shaarawy akanga ari kunyanya kutsigira mwanakomana wake achienderera mberi nedzidzo apo baba vake vaida kusanganiswa kwevadzidzi uye yebhola.
Hanzvadzi konama: Stephan ane mukoma wemukomana anonzi Manuel El Shaarawy. Panzvimbo pokutsamira pfuma yehanzvadzi yake huru, Manuel akafananidzirwa pasi apa wakaenda kuva mugovera webhola.
Vose vanotenda kumudzimai wake Lucia. Pasina makore anopfuura 25, Manuel Shaarawy ave mudzidzi weMasters degree muMatokiti neBusiness Strategies kubva paOfisheni yeEconomics kuKatorike University ye Sacred Heart, Milan Italy. Chiitiko chake chekudzidza iye zvino chinosangana nebasa rake rehutano mukutarisa basa rehama yake.
Stephan El Shaarawy Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts-Mvere Yake
Pane imwe nguva, Stefani fan Aldo akamboti ..."Mwanakomana wangu ane makore matanhatu anoda vhudzi seyako. Chii chaanofanira kuita? "
"Pane chinhu chimwe chete chingaita uye ndiko kumuendesa kune vandinoshandira mvere! Ndine zvitatu chaizvo-imwe mu Savona, imwe muMilan uye imwe pano muRoma. "
Mwanakomana weAldo akazoguma ane Stephan's hairstyle sezvinoratidzwa pasi apa.
Inguva yakareba sei inokutora iwe kuzora vhudzi rako mangwanani? Uye iwe unoshandisa gelini?
Stephan's response ..."Kwete kwenguva refu kwazvo. Hazvidi kuti chero chinhu chipi zvacho chiite mazviri nhasi. Handitombozviputi. Ndinongorirova nechisviniro chebvudzi, shandisa zvishoma zvewashi - kwete gel - uye dzimwe nyoro kuti dzigadzire panzvimbo uye ndizvo zvazviri. "
Stephan El Shaarawy Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts-Idhori Yake
Maererano naStephan El Shaarawy ... "Ndaimbogara ndichitarisa Kaka pandakanga ndichiri muduku - paakanga ari AC Milan. Akanga ari muenzaniso wangu, zvose uye kubva panzvimbo yacho. Nguva dzose aifamba seari pasi-pasi-pasi, kunyange ndisati ndasangana naye. Zvadaro ndakazoziva kwaari imwe nguva apo takatamba Real Madrid mune ushamwari muAmerica uye aive chaizvo sezvandaifungidzira - munhu akanaka kunze kwekunge ari mutambo wemutambo. "
Stephan El Shaarawy Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts-Kurambwa naBaba vake Nyika
Pakutanga, Stephan aikwanisa kutamba Egypt national team yebhola yebhola, asi rakarambwa ipapo-coach Hassan Shehata uyo asingaziviachitaura izvozvo "Kwete dzose VaEgipita kutamba mutambo wekune dzimwe nyika unofanirwa kutamba kune rumwe rutivi rwenyika ".
Kusuruvara, El Shaarawy ndokutanga kutamba ne Italy U-17 boka raakatora in zvose the 2009 UEFA U-17 Euro uye 2009 FIFA U-17 World Cup.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Stephan El Sharawy Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Julia Mbudzi 19, 2018 Pa 4: 15 pm
Muy bueno los datos, pero creo iyo inobatanidzwa mune imwe yega. Sobre su novia, desde hace un par des años que de no esta con ella.
David Zappacosta Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Mario Balotelli Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts